‘कृ’ र ‘सत्रुगते’ को प्रतिक्षित गीत ‘न्यु ईयर’मा रिलिज « Ramailo छ
‘कृ’ र ‘सत्रुगते’ को प्रतिक्षित गीत ‘न्यु ईयर’मा रिलिज
अंग्रेजी न्यु ईयरलाई लक्षि गर्दै दुई प्रतिक्षित फिल्मले गीत रिलिज गर्ने भएका छन् । किरण केसी तथा मह जोडी निर्मित ‘सत्रु गते’ ले शुक्रबार र अनमोल केसी स्टारर ‘कृ’ ले आइतबार फिल्मको गीति भिडियो सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । युवा स्टार ‘कृ’ र मल्टीस्टार ‘सत्रु गते’ को गीत कत्तिको प्रतिक्षित छन् त ?
छायाँकन सकेर प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका ‘कृ’ र ‘सत्रुगते’ को गीत आ-आफ्नै हिसाबले प्रतिक्षित छन् । ‘यति यति पानी’को रिमेक भर्सन ‘कृ’ को गीत विशेष गरी युवा पुस्ता माझ प्रतिक्षित छ भने ‘सत्रुगते’ को ‘रुपै मोहनी’ आम दर्शकलाई चासो छ । प्रतिक्षा र चासो यसकारण पनि छ कि अनमोलले पहलो पटक क्लब संगमा डान्स गरेका छन् । यता ‘सत्रुगते’को ‘रुपै मोहनी’मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, पल शाह, आँचल शर्मा जस्ता अग्रज तथा युवा स्टारको नृत्य छ ।
‘कृ’ मा रेनशा वान्तवा राई र ‘सत्रुगते’मा कविराज गहतराजले नृत्य निर्देशन गरेका छन् । हेरौं एकैदिन रिलिज हुने यी दुई फिल्मी गीतको भिडियो कस्तो बनेका छन् ? ‘कृ’ माघ २६ र ‘सत्रुगते’ चैत ९ मा प्रदर्शन हुनेछन् ।